Wasaarada Maaliyadda oo soo saartay Wareegto lagu joojinayo Lacagaha Caafimaadka ee Askarta Puntland
Boosaaso: Wasaarada Maaliyadda oo soo saartay Wareegto lagu joojinayo Lacagaha Caafimaadka ee Askarta Puntland...
(Dec 10, 2006:) Wasaarada maaliyada DGPL ayaa soo saartay amar lagu joojinayo lacagaha ay qaataan askarta ee la xiriirta caafimaadkooda taasi oo ka baxsanayd mushahaarka ay qaataan oo aysan si toos ah xataa u helin mushahaarka iyo lacagtan hada la joojiyay ee caafimaadka.
Askari ku sugan magaalada Garowe oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa SomaliTalk.com u xaqiijiyay in uu amarkani ka soobaxay wasaarada maaliyada islamarkaana uu yahay amar dag dag ah oo aysan xukuumadu ka soo saarin wax qoraal ah iyo mid ay u gudbisay baarlamaanka oo ay wasaaradu iska goosatay amarkaan.
Askarigan ayaa ku tilmaamay amarkan mid aan sharciga waa faqsanayn islamarkaan aysan askartu heli jirin lacagahan iminka la jaray ee caafimaadka oo ay ku dhici jirtay "jeebka calooshood u shaqaystayaasha", waa sida uu hadalka u dhigay'e.
Tilaabadaan ay maanta qaaday wasaarada maaliyada ayaan lagaranayan waxa ay salka ku hayso ayadoo aysan awalba askartu heli jirin musharaarkooda si joogta ah.
Askarta ciidanka ah ee puntland ayaa ah kuwo u taagan mushahaar la'aan mana jiraan mushahaar ay si joogto ah u helaan bil walba waxaana hada ka maqan 9 bilood oo mushahaar ah oo aysan askartu helin lamana garanayo xiliga ay helidoonaa.
Horey ayaa mushaharada ciidamada looga jaray 15% lacagihii ay horey u qaadan jireen, codsigaasi oo ay Wasaarada Maaliyadu u gudbisay golaha Wakiilada ayaa lagu ansixiyey Kalfadhigii 16aad ee ay yeesheen golaha baarlamaanka puntland.
Dhamaan Ciidamada Booliiska iyo kuwa kale ee Amniga iyo Daraawiishta ayaan in muddo ah oo gaareysa 9 bilood qaadan wax mushaharo ah iyadoo ay tilaabadanina ay sii xoojinayso walaacii ay horay u qabeen ciidanka puntland ee mushahaar la'aanta u bartay una taagan musha'haar la'aanta sanad walba.
Wasaaradda maaliyada ee DGPL ayaa horay loogu canbaareeyey musuqmaasuq iyo wax is daba marin baahsan oo ka jira gudaha wasaarada maaliyada manajirto cid wax ka qabatay arinta lagu eedaynayo wasaarada maaliyada mar sii horaysay ayaa madaxwaynaha DGPL Gen: Cadde Muuse laftigiisu ku eedeeyay wasiirka maaliyada hanti lunsasho mar uu u waramayay kalfadhigii 17aad ee baarlamaanka halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad hase ahaatee madaxwaynuhu eedayntaas uu u soo jeediyay wasiirka maaliyada waxba kama qaban maadaama uu isagu u magacaabay xilka wasiirnimada wax ka qabashadeedana uu lahaa.
Shaqaalaha dowlada Puntland ayaa si weyn uga cawda dhinaca mushaharada oo bilaha qaarkood aan la bixin, ayadoo ay ciidamadu ay yihiin kuwa ugu daran oo aan helin si joogta ah bil walaba, halka la sheego in shaqaalaha in toodabadan ay helaan lacago ka baxsan mushahaarkooda oo aan lagula xisaabtamin.
Musuqmaasuqa baahsan ee ka jira xukumuuada puntland ayaa waxaa hooyo u ah wasaarada maaliyada oo iyadu inta badan maamusha dhammaan wixii kharashaad ah ee la bixinayo.